Inkinga eTurkey ishaya i-BBVA | Ezezimali Zomnotho
UJose recio | | I-Banca, Umnotho jikelele
Izizathu ezingaphezu kokwanele zokukhathazeka ngabatshalizimali be-BBVA. Okukodwa kwe amanani we-pointer yamasheya aseSpain ibone ukwehla kwentengo yamasheya ayo ngenxa yokuchayeka kwawo ngokweqile emnothweni waseTurkey. Indawo esenkingeni enkulu ngemuva kokulahleka okukhulu kwenani lemali yayo ngenxa ye- impi yezohwebo odabula izwe lakho maqondana ne-United States. Kuze kube seqophelweni lokuthi abahlaziyi bezimali abambalwa bacabanga ukuthi sisekuqaleni kwenkinga yezomnotho engathinta umhlaba wonke.
Ngalo mqondo, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuvezwa kwe-BBVA okwamanje kuphezulu kakhulu, nezimpahla zezimali ezisesimweni saseTurkey esifinyelela ezigidini ezingama-84.000 zamaRandi (73.200 million euros). Akunakukhohlakala ukuthi enye yezinhlamvu ezinkulu eziluhlaza okwesibhakabhaka zezinkomba zemakethe yaseSpain, iIxx 35, ilawula cishe isigamu seGaranti, enye yezinto zebhange ezibaluleke kakhulu ezweni lase-Ottoman. Ngalesi sizathu, amasheya eqembu lezezimali ebeliholwa nguFrancisco González awe phansi ngoLwesihlanu olwedlule.
Konke lokhu, ngesikhathi sasehlobo lapho izobe isibambe khona ingxenye enhle yabatshalizimali bayo abancane nabaphakathi eholidini. Ngoba ezinsukwini ezizayo ukuthengiswa okunamandla kwamasheya ayo kungahle kusebenze, ngengozi yokuwa okusha nokukhulu kakhulu ezimakethe zezezimali. Kuze kube seqophelweni lokuthi abasebenzisi abaningi abazi ukuthi benzeni kulezi zinsuku, uma ngakolunye uhlangothi behlehlisa izikhundla kuleli nani elibalulekile lezimali zikazwelonke. Noma kunalokho, hlala ezikhundleni ngethemba lokuthi amasheya e-BVVA azobuyisa inani lawo esikhathini esingeqile ngokweqile.
1 I-BBVA yehle ngaphezu kuka-5% emakethe yamasheya
2 Ubugebengu emabhange aseTurkey
3 Amasu okutshala imali ebhange
4 Ingabe ithuba lokuthenga le-BBVA?
I-BBVA yehle ngaphezu kuka-5% emakethe yamasheya
Imiphumela yenkinga yaseTurkey ayikabi yisikhathi eside ekulinganisweni kokuphepha kwebhange elikhulu likazwelonke. Ngoba empeleni, ukwehla kwalo kudlule u-5% futhi ngalo kuhudule i-Ibex 35, njengenye yezimpawu zemakethe yamasheya ezijeziswa kakhulu kulezi zinsuku. Ngoba akwaziwa noma ngabe okubi kakhulu kusazofika. Ngakolunye uhlangothi, i- umkhakha wamabhange kungenye yezinto ezivezwe kakhulu kule nkinga efinyelele umbuso onamandla wamaSulumane. Ngokuncipha emabhange asele emakethe yamasheya aseSpain phakathi kuka-1% no-2%, yize kungafinyelelwanga i-alamu eyenziwe phakathi kwabaninimasheya beBBVA.
Kuyisimo esiyinkinga kakhulu kubo bonke abatshalizimali kusukela lapho ibhange lapho inkampani yezimali yaseSpain ixhunywe khona lishiye emasontweni amuva nje kuphela 2.500 million euro. Yonke isignali evimbela umzabalazo phakathi kwabathengisi nabathengi ngenzuzo ecacile yangaphambili. Okungenani kuze kube manje futhi kuzodingeka ukuthi kubhekwe ukuthi yiziphi izimakethe zezimali ezivela kuleli sonto njengoba kuzoba ngukhiye ukukhombisa ukuthi yiliphi isu elingcono kakhulu okumele abatshalizimali balithathe.
Ubugebengu emabhange aseTurkey
Esinye sezici okufanele siziswe kakhulu enkingeni ethinta iTurkey ukuthi ibhange eliholwa nguFrancisco González line vala isabelo semakethe kuya kumaphesenti ayishumi ezweni laseTurkey. Okuthile okubaluleke kakhulu ukuhlaziya le nkinga entsha yezomnotho obekulindelwe noma ngubani. Yize kunalokho, amazinga obugebengu akakhathazi kakhulu. Kutholakale okwamanje kusondele kakhulu ku-10%, yize kunjalo kuyanda ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule. Kunoma ikuphi, isikhundla sebhange elikhulu laseSpain lidlula ezikhathini ezibucayi kakhulu kubo bonke abatshalizimali.
Ngalesi sikhathi kuzofanele silinde ukuthi kwenzekani ngemiphumela elandelayo yebhizinisi yaleli qembu lezezimali. Kuze kube seqophelweni lokuthi inganikeza imihlahlandlela yenhloso enkulu yokuhlehlisa noma hhayi izikhundla kuleli nani lemakethe yamasheya. Ngoba kuyiqiniso ukuthi cishe noma yini ingenzeka, njengoba abahlaziyi abaningi bezezimali bexwayisa. Ngokwalo mbono, into ebaluleke kakhulu ukuthi ubekwe eceleni kwalezi zenzo ngoba zinganikeza ukucasuka okungaphezu kokukodwa ezindaweni zokuhlala. Futhi imayelana nokuphela kosuku ukugwema lezi zimo ezingafunwa kangako ngabatshalizimali baleli bhange.
Amasu okutshala imali ebhange
Kuleli qophelo, kuzofanele ucabangele okufanele ukwenze ngezenzo zakho kusukela manje kuqhubeke. Ngoba empeleni, i-BBVA yinani ebelingu- impela, kodwa lokho kuye kwawa kakhulu ezimakethe zamasheya kulezi zinsuku zika-Agasti. Ukugwema ukusebenza okungahambisani nezintshisekelo zakho njengomthengisi, ngeke ube nokunye ongakwenza ngaphandle kokuthatha izinyathelo ezithile ukuphepha kwakho. Imayelana nokuthi imayelana nani, futhi ngalokhu sikuvezela ezinye izinhlobo ezingaba wusizo olukhulu kulezi zinsuku eziyinkimbinkimbi.
Uma unesifiso sokuvula izikhundla ku-BBVA, kuzoba ngcono kakhulu ukuthi ulinde amathuba amasha okungena kunani lemakethe yamasheya. Vele, manje akusona isikhathi esifaneleke kakhulu, kude naso. Akumangalisi ukuthi unokuningi okulahlekile kunenzuzo kulolu hlobo lokusebenza. Okungenani zilibazise isinqumo sakho amasonto ambalwa noma okungenani uze ubuye kuleli holide lasehlobo.
Ungacabangi ukuthi inani lamasheya we-BBVA lishibhile kakhulu, ngoba kungaba njalo okuphambene nalokho. Kuze kube seqophelweni lokuthi kungenye yezindlela ezingqubuzana kakhulu kuzo zonke izingxoxo zomhlaba wonke futhi akuyona indaba yokugembula imali yakho ngesinqumo esingenangqondo, kepha ngaphezu kwakho konke ngaphambi kwesikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, leli bhange alibonisanga i- isici sobuchwepheshe okunomona ngempela, uma kungenjalo ukuthi kunalokho kwenze ukungabaza okuningi phakathi kwabahlaziyi nabatshalizimali abancane nabaphakathi. Sebenzisa le datha efanelekile ukuze uhlale ungaphandle kokusebenza kwakho. Ngoba ekugcineni uzonqoba kunoma yiliphi isu lokutshala imali olisebenzisayo kusuka kulezi zikhathi eziqondile.
Uma okufunayo kungukuthi imisebenzi esheshayo Vele, ngeke ubhekane nenani elingcono kakhulu lokusebenzisa lolu hlelo olukhethekile lokutshala imali. Ngalo mqondo, awukwazi ukukhohlwa ukuthi amasheya aleli qembu lezezimali okwamanje aphansi kwengcindezi eyehla kakhulu. Kungani ubeka engcupheni iminikelo yakho yezezimali?
Kuyiqiniso ukuthi ungakuthola amanani aphansi kokulandelayo futhi ngenxa yalesi sizathu akukhona ukuhlakanipha ngawe ukuthi uqhubeke nokusebenza. Akufanele uthenge okushisayo njengoba ungalenza iphutha. Akufanele uthathe isenzo ngalesi sikhathi lapho amasheya ebhange laseSpain esehle kakhulu.
Uma, ngakolunye uhlangothi, unezikhundla ezivulekile, akusona isikhathi esifanele unganyakazi. Kuzoba ukuhlakanipha okukhulu uma ulinda izinsuku ezimbalwa ukubona ukuthi amasheya e-BBVA aguquka kanjani. Enye into ehluke kakhulu ukuthi ukuwa emakethe yamasheya nsuku zonke futhi kunokuqina okukhethekile.
Ingabe ithuba lokuthenga le-BBVA?
Ngaphandle kwalokho ezinye izinkampani ezincane nezisemaphakathi ezingase zikucabange okwamanje, i-BBVA akulona ithuba lebhizinisi. Uma kungenjalo, kunalokho, isici salo sobuchwepheshe sonakele ngokuphawulekayo. Ukufika lapho kubiza khona okuningi ukubuyela esimweni sokuqala, ngaphambi kokuqubuka kwenkinga eTurkey. Vele, kunamanye amaqembu amakhulu amabhange athanda ukuthatha izikhundla. Ngaphandle kwengozi yokuziveza ekuxhumekeni kwabo kwaseTurkey. Enye into ehluke kakhulu ukuthi isikhathi sakho sokuhlala sinjalo okulingene nokude. Kulokhu, kungahle kuthakazelise ukuthenga amasheya e-BBVA ngesaphulelo ngamanani abo enzeke ekupheleni kwesonto eledlule.
Ngakolunye uhlangothi, umkhakha wamabhange ungenye yezigaba zebhizinisi okufanele uzigweme ngalezi zinsuku ezingajwayelekile emalini yamazwe omhlaba. Ngokuqinisekile akuyona ukubheja okuhle kakhulu ongakuthatha njengamanje. Unezinye imikhakha ezivikela kakhulu ezinikezwe izingozi eziphansi kumasu okutshala imali ozowenza. Lokhu akusho ukuthi amabhange azokuthola kungalungile esikhathini eside. Hhayi kancane, kepha kufanele ubheke amanani angaphansi kwe- phezulu kucace bha. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi mhlawumbe futhi kusuka endaweni yokubuka eyisisekelo.
Okokugcina, kulula kuwe ukuthi ukhumbule njengoba sike sachaza phambilini ukuthi ungathola amanani aphansi kwabambalwa abalandelayo futhi ngenxa yalesi sizathu akukhona ukuhlakanipha ngawe ukuthi uqhubekele phambili emisebenzini yezimali. Akungabazeki ukuthi kuleli hlobo uzokwazi ukuthola amanani aphansi kakhulu futhi ube namandla wokubuyekeza athakazelisayo kunamanje. Ngoba emakethe yamasheya, ukushesha akubona abeluleki abahle, futhi lokhu kuyiqiniso ngokuphelele kumasheya e-BBVA. Noma yikuphi ukunyakaza okungalungile kungakwenza ulahlekelwe yimali eningi ezimakethe zezezimali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Inkinga eTurkey ishaya i-BBVA